Wasaaradda Caafimaadka si ay u Iibsato Kaaliyaha kormeeraha - RayHaber | raillynews
HomeGUUDShaqooyinkaWasaaradda Caafimaadka si ay u Iibsato Kaaliyaha Kormeeraha Isbatooraha
kaaliyaha wasaarada caafimaadka si wax looga iibsado
Ku dhawaaqista Imtixaanka Galitaanka Kaaliyaha Kormeeraha Imtixaanka laga soo qaaday Guddiga kormeerka ee Wasaaradda Caafimaadka; Imtixaanka Galitaanka Kaaliyaha Kormeeraha waxaa loo qaban doonaa 16 (Lix iyo toban) Kormeerayaasha Kaaliyaha kormeeraha guud ee howlaha maamulka guud inta u dhaxaysa taariikhaha 20-31 / 01 / 2020 si ay u shaqaaleeyaan Guddiga Kormeerka Caafimaadka.
I. SHURUUDAHA KU SAABSAN CODSASHADA Imtixaanka Caymiska
Kuwa raba inay galaan Imtixaanka Galitaanka waa inay buuxiyaan shuruudaha soo socda:
a) In la buuxiyo shuruudaha guud ee lagu sheegay qodobka 657 ee Sharciga Shaqaalaha Rayidka ah ee 48
b) Inuu ka qalinjabiyo waaxyada kombiyuutarka, warshadaha iyo injineeriyada rayidka ee kulliyadaha cilmiga dhaqaalaha iyo maamulka, cilmiga siyaasada, sharciga, dhaqaalaha iyo maamulka ganacsiga iyo kulliyadaha injineernimada oo leh ugu yaraan 4 sano oo ah shahaadada koowaad ee jaamacadda, ama machadyada waxbarasho ee turkiga iyo dibedda kuwaas oo uqalma ay aqbaleen masuuliyiinta kartida u leh.
c) Waxaa lasiiyaa in natiijooyinka KPSS aysan ansax aheyn illaa waqtiga kama dambeysta ah ee arjiga; KPSSP9, KPSSP11, KPSSP28, KPSSP33, KPSSP38, KPSSP43, KPSSP48, KPSSP1, KPSSP80 oo loogu talagalay ardayda ka qalin jabisay cilmiga dhaqaalaha iyo maamulka, macluumaadka siyaasadeed, sharciga iyo dhaqaalaha iyo ganacsiga si aad u heshay ugu yaraan dhibcaha XNUMX.
ç) 01 Janaayo Ma aha inay shan iyo soddon jir noqoto sida 2020
d) Ma jiraan wax carqalad ku ah kormeeraha marka la eego diiwaangelinta garsoorka.
e) Inuu awood u yeesho inuu qabto waajibaadka iyo socdaalka guud ahaan dalka marka loo eego xaaladda caafimaad.
II. HABKA CODSIGA IYO DIIWAANGALYADA LOO BAAHAN YAHAY
Codsadeyaasha doonaya inay galaan imtixaanka gelitaanka; Madaxtooyadayadu waxay diyaarisay “Foomka Codsiga Imtixaanka ıslak kaas oo lagu daabacay websaydhka rasmiga ah (www.teftis.saglik.gov.tr) oo leh qaab qoyan, sax ah oo sax ah, shahaadada natiijada KPSS, dibloomada waxbarashada sare ama shahaadada qalinjebinta, haddii ay jiraan, nuqul ah shahaadada u dhiganta. iyo laba sawirro ah 9 - 20 Intii u dhaxeysay Diseembar 2019, Wasiirka Kormeerka Caafimaadka ee Xarunta Madaxtooyada Bilkent Campus Üniversiteler Mah. Dumlupınar Boulevard 6001. Cannavaro. Maya: 9 Dabaqa: 6 06800 waxay shakhsi ahaan u gaarsiin doontaa Çankaya / ANKARA shaqsi ahaan boostada / xamuulka ama maalmaha shaqada inta u dhaxaysa 09: 30-18: 00 saacadaha shaqada.
Dukumiintiyada aan kor ku soo sheegnay waa in loo gudbiyaa Guddiga Kormeerayaasha ugu dambeyn 20 Diseembar 2019. Araajida aan ku soo gaadhin Madaxtooyada wakhtigii loogu talo galay, oo ay ka maqan yihiin macluumaad iyo dukumiintiyo ama la arko in aysan buuxin shuruudaha la sheegay lama aqbali doono mana qiimeyn doonaan. Taariikhda arjiga ayaa lagu saleyn doonaa taariikhda iyo waqtiga gelitaanka qeybta dokumentiga ee Guddiga Kormeerka Caafimaadka. Dukumiintiyada laxiriira codsiyada kuwa aan buuxin shuruudaha codsigana dib ayaa loogu soo celinayaa markii la codsado.
III. BARASHADA CARRUURTA IYO QUOTAS
Murashaxiinta u galaya imtixaanka gelitaanka ilaa afar jeer dhibcaha imtixaanka dhexe iyo kaaliyaha kormeeraha shaqaalaha waxaa loogu yeeri doonaa iyadoo loo eegayo qoondada ay go'aamisay iyadoo la raacayo kootada ay go'aamisay laamaha waxbarashada ee ka bilaabma dhibcaha ugu sareeya ee KPSS lagu dabaqay. Si kastaba ha noqotee, murashaxiinta leh dhibco isku mid ah musharraxii ugu dambeeyay waxay u qalmaan inay galaan imtixaanka.
Qeybinta shaqaalaha kormeeraha 16 ee dhanka waxbarashada, qoondada, tirada musharixiinta loogu yeerayo imtixaanka iyo noocyada dhibcaha KPSS waa sida soo socota;
Waxbarashada kootada Tirada Musharixiinta Qodobbada KPSS
Sayniska Dhaqaalaha iyo Maamulka, Sayniska siyaasadeed, Sharciga,
Awoodaha Dhaqaalaha iyo Maamulka Ganacsiga 11 44 KPSSP9
Injineernimada warshadaha 1 4 KPSSP1
Injineernimada kombuyuutarka 2 8 KPSSP1
Injineernimada 2 8 KPSSP1
WADARTA 16 64
Lacala hadii aysan jirin tiro codsiyo ku filan oo ku saabsan qoondada ay go’aamisay laamaha waxbarashada, guddiga kormeerayaasha ayaa laga yaabaa inay isbeddelo ku sameeyaan kootada.
IV. MADAXWEYNAHA Aqoonsiga ee Imtixaanka
Liisaska murashaxiinta xaq u leh inay galaan Imtixaanka Galitaanka waxaa lagu shaacin doonaa internetka barta internetka ee ah http://www.teftis.saglik.gov.tr. Ogeysiis dambe lama siin doono musharixiinta. Imtixaanka, kaarka aqoonsiga ee leh lambarka Aqoonsiga oo lagu ansaxiyay sawir, sida shahaadada dhalashada ama laysanka darawalka, waa in loo hayaa si lagu aqoonsado. Codsadeyaasha aan soo gudbin karin dukumiintigaas ma geli doono imtixaanka.
V. Goobta iyo FOOMKA CASRIMADA DIIWAANKA
Qaab-dhismeedka qodobbada Xeer-hoosaadka Adeegyada Kormeerka ee Wasaaradda Caafimaadka, imtixaanka gelitaanka, oo ka koobnaan doona oo keliya imtixaanka ORAL, ayaa waxaa fuliya Guddiga Kormeerka Caafimaadka ee Bilkent Campus Üniversiteler Mah. Dumlupınar Boulevard 6001. Cannavaro. Maya: Dabaqa 9: 6 waxaa lagu qaban doonaa Çankaya / ANKARA.
VI. Hordhac Tijaabooyin Hordhac ah
A) Maadooyinka imtixaanaadka ee ardayda ka qalin jabisa cilmiga dhaqaalaha iyo cilmiga maamulka, cilmiga siyaasada, sharciga, dhaqaalaha iyo awoodaha ganacsiga;
1. Sharciga dastuurka (mabaadiida guud),
2. Mabaadi'da guud ee sharciga maamulka, garsoorka maamulka, abaabulka maamulka,
3. Sharciga dembiyada (Mabaadiida guud iyo dambiyada madaniga ah),
4. Sharciga madaniga ah (Mabaadi'da guud iyo xuquuqaha nooc ah),
5. Sharciga waajibaadka (Mabaadiida guud),
6. Sharciga ganacsiga (mabaadiida guud),
7. Sharciga habraaca dambiyada (mabaadiida guud).
1. Aragtida dhaqaalaha (microeconomics, macroeconomics),
2. Taariikhda fikradaha dhaqaale iyo caqiidooyinka,
3. Lacag, bangi, amaah iyo iskuxirid,
4. Xiriirka dhaqaalaha caalamiga ah iyo ururada,
5. Dhaqaalaha ganacsiga,
6. Dhibaatooyinka dhaqaale ee hadda jira.
1. Mabaadi'da guud ee miisaaniyada iyo siyaasadaha miisaaniyada,
2. Kharashaadka dadweynaha
3. Miisaaniyadda. d) Xisaabaadka;
1. Xisaabaadka guud,
2. Falanqaynta xaashida iyo farsamooyinka,
3. Koontada Ganacsiga.
d) Guud ahaan, arrimaha hadda jira iyo arrimaha dhaqan-dhaqaale.
B) Kuwa ka qalin jabiyay kumbuyuutarka, warshadaha iyo waaxaha injineeriyadda rayidka ee kulliyadaha injineeriyadda
a) Maaddooyinka aqoonta gudaha ah ee lagu go'aamiyay iyadoo la tixgelinayo manhajka ardayda qalin-jabisay, b) Guud ahaan, maaddooyinka hadda jira iyo kuwa dhaqan-dhaqaale.
VII. QIIMAYNTA DHAQAALAHA
a. Heerka aqoonta ee la xidhiidha maaddooyinka imtixaanka,
b. In la fahmo oo la soo koobo maado, kartida muujinta iyo awoodda sababaynta,
c. Macaash, karti wakiilnimo, ku habboonaanta habdhaqanka iyo falcelinta xirfadda, ç. Is-kalsooni, qancin iyo is-qancin,
d. Tayada guud iyo dhaqanka guud,
e. U-furnaanta horumarka sayniska iyo tikniyoolajiyada waxaa lagu qiimayn doonaa marka dhinac la eego.
Murashaxiinta waxaa qiimeyn ku sameyn doona komishanka dhibcaha 50 ee dhibcaha (a) iyo dhibco 10 mid kasta oo ka mid ah astaamaha lagu taxay dhibco (b) ilaa (e). Si loogu guuleysto imtixaanka, celceliska xisaabta ee dhibcaha uu siiyay gudoomiyaha iyo xubnaha komishanka ee ku saabsan natiijada buuxda ee 100 waa inay ahaadaan ugu yaraan 70.
VIII. DIIWAAN GELINTA IYO CODSASHADA LACAGAHA
Dhibcaha imtixaanka gelitaanka waa inuusan ka yarayn 70 si loogu tixgeliyo inuu yahay kaaliyaha kormeeraha imtixaanka. Xaaladda sinnaanta ee dhibcaha imtixaanka gelitaanka, murashaxa leh dhibco KPSS sareeya ayaa leh mudnaanta. Marka loo eego natiijada imtixaanka, guusha imtixaanka gelitaanka waxaa loo go’aamin doonaa si gooni gooni ah iyadoo loo eegayo laamaha waxbarashada, laga bilaabo musharraxa oo leh natiijada ugu sarreysa, magacyada maamulaha iyo badalka musharixiinta ayaa loo go’aamin doonaa iyadoo loo eegayo laamaha waxbarashada ee lagu caddeeyay ogeysiiska.
Natiijooyinka Imtixaannada waxaa lagu shaaciyey websaydhka Madaxtooyada, musharraxiinta ku jira liiska asalka ah iyo kuwa keydka ayaa la ogeysiinayaa. Musharraxa guuleystaa wuxuu luminayaa xuquuqdiisa haddii uusan ka codsanin Madaxweynaha muddo ku siman 15 maalmood laga bilaabo taariikhda ogeysiinta. Murashaxiinta beddelka ah waxaa loogu yeeraa si loogu guuleysto muddo lix bilood gudahood ah ka dib markii lagu dhawaaqay natiijada imtixaanka halkii musharixiinta aan ka imaanin murashaxiinta asalka ah magacaabista ama kuwa aan la magacaabin iyo kuwa aan bilaabin howsha ama u casila sabab kasta. Murashaxiinta aan u imaanin ballanta ama aan la magacaabin oo aan bilaabin waajibaadka, natiijada imtixaanka looma arko inay yihiin xuquuq la kasbaday.
Diidmada natiijooyinka imtixaanka gelitaanka waxaa loo sameeyaa Madaxtooyada gudaheeda maalmaha 5 maalmaha shaqada laga bilaabo maalinta natiijada lagu dhawaaqo. Madaxtooyadu waxay ka jawaabtaa diidmada maalmo gudahood maalmaha shaqada ee 10.
IX. FADLANADA KALE
Imtixaannada codsadayaasha ee lagu helo inay bayaanno been abuur ah ka sameeyeen dukumiintiyada dalabka waxaa loo arkaa inay yihiin kuwa aan shaqeyn. Waa la tirtirayaa xitaa haddii loo xilsaaray. Dacwad dambiilayaal waxaa loo gudbiyaa Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud ee dadweynaha ku saabsan dadkaas iyo haddii ay si qaldan u marin habaabiyaan hay'adda, xaaladdooda waxaa la ogeysiiyaa xarumaha ay ka shaqeeyaan.
Si xushmad leh ayaa loo shaaciyey.
Qorista Kaaliyaha Kormeeraha Guud ee Wasaaradda Caafimaadka